အသားဖြူဖို့ကနံပါတ် (၁) လား? နိုးးးး အသားအရေကောင်းဖို့က နံပါတ် (၁) ပါနော်... - For her Myanmar
အသားဖြူဖို့ကနံပါတ် (၁) လား? နိုးးးး အသားအရေကောင်းဖို့က နံပါတ် (၁) ပါနော်…
ပေါ့စေချင်လို့ကြောင်ရုပ်ထိုး၊ ဆေးအတွက်လေး ဆိုတဲ့ အကွက်တွေ
မှန်မှန်ဖြေယောင်းလေး။ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်း (skincare) ကိုသွားဝယ်တဲ့အခါမှာ အသားဖြူချင်လို့ဆိုပြီးပဲ အမြဲပြောဝယ်တယ်မလား? အလှကုန်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတွေကလည်း လူတွေတောင်းဆိုတာများတော့ ဒီ Whitening line (အသားဖြူစေတဲ့ပစ္စည်းတွေ) ကိုပဲထုတ်လာကြပြီး သိပ်မလေ့လာကြတော့ဘဲ ဘာသုံးရမလဲ မေးတာနဲ့ ဒါကိုပဲထိုးပေးတတ်တာက အကျင့်ကြီးတစ်ခုလို ဖြစ်နေရောလေ…
မယုံရင်တစ်အိမ်တက်တစ်အိပ်ဆင်း မှန်တင်ခုံတွေ လိုက်ကြည့်မလား? ၁၀၀ မှာ ၉၀ လောက်က ဒီလိုအသားဖြူမယ့် ပစ္စည်းတွေကိုပဲ သုံးတာ။ အဲ့တော့ မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဆိုသလိုပဲ အသည်းတွေအရမ်းယားလာလွန်းလို့ ခုပြောတော့မယ်။
ယူတို့တွေ အသားဖြူဖို့အတွက် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်း ၃ မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိလား?
ပထမတစ်မျိုးက ဗီတာမင်စီသောက်ပေး၊ ဗီတာမင်စီပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပေးတော၊ ဒုတိယတစ်ခုက ဗီတာမင် B3 (Niacinamide) ကို သောက်ပေးတာ (သို့) ဗီတာမင် B3 (Niacinamide) ပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သုံးပေးတာ၊ တတိယတစ်ခုကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ မယ်လနင်ဓာတ်တွေကို လျှော့ချပစ်လိုက်တာ စသည်ဖြင့်ရှိပါတယ်။
ပထမတစ်နည်းကတော့ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ဗီတာမင်စီက ဝက်ခြံသမားတွေနဲ့ လုံးဝမတည့်ဘူးဆိုတာ သိကြလားဟင်? ဒါကြောင့် တိုနာသုံးပြီးမှ၊ စကင်းကဲလိုက်မှ ဝက်ခြံတွေ ပိုထွက်လာတယ် ဆိုတာမျိုးကြုံရတာပေါ့။ ကောင်တာကမမတွေလည်း ပေးကြတယ်နော် အားကြီးနဲ့။ အဆီတွေအရမ်းပြန်ပြီး ဝက်ခြံတစ်ပြုတ်လိုက် ထွက်နေလည်း ရော့ Whitening။ အလွန်အကြူးတွေ လုပ်ကြတာတော်… ဖြူရင်ပြီးရော.. စုတ်ပြတ်နေလည်း အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ ရပါတယ် ယူတို့သဘော။
နောက်တစ်မျိုးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ မယ်လနင်ဓာတ်ကို လျှော့ချတဲ့နည်း။ ယူတို့အသားဖြူချင်တာ ကိစ္စမရှိဘူး။ ဒီမယ်လနင်ဓာတ်တွေက ယူတို့ကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကနေကာကွယ်ပြီး အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းကို လျှော့ချပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကို ယူတို့မသိတာလား၊ မသိချင်ယောင်များ ဆောင်နေရော့သလား?
နောက်ပြီး ဒီလိုအသားဖြူဆေးတွေက ဓာတုပစ္စည်းတွေ အရမ်းများပြီး ဖြူရင်လည်း သဘာဝအတိုင်းဖြူတာမဟုတ်လို့ ကောင်းနေတဲ့ အသားအရေတောင် စန်းစန်းတင့်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အပြင် ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အားပေးသလိုမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်တာမို့ ဒီနည်းကိုလည်း လက်ရှောင်သင့်ပါတယ်နော်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Vitamin B3 (Niacinamide) ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးတာ။
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ အားလုံးထဲမှာ နှင်းအကြံပြုချင်တဲ့နည်းလေးပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကရှိရင်းစွဲအသားကို ဖြူသွားစေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မညီမညာဖြစ်နေတာလေးတွေကိုပဲ ညီညာသွားအောင် ညှိပေးတဲ့အပြင် အသားအရေတိုင်းနဲ့လည်း သင့်တော်တာဆိုတော့ အဖုထွက်တာတွေ၊ အဆီပြန်တာတွေနဲ့ မယ်လနင်းဓာတ်ကို လျှော့ချပစ်လိုက်တာမျိုးတွေမရှိဘဲ အန္တရာယ်ကင်းကင်း သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဓာတ်ပါတဲ့ပစ္စည်းက ရှာရတာတော့ နည်းနည်းလေး ခက်တာမို့ အခက်အခဲလေးတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ဝင်းပစိုပြည်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ မီးဖိုချောင်ထဲက လျှို့ဝှက်မိတ်ဆွေလေးများ
ဆိုတော့ ဗီတာမင်စီက ဈေးကွက်ထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ တွေ့နိုင်တာမို့ ဒါပဲ သုံးမှရမယ်ဆိုရင်တော့ ဝက်ခြံသမားတွေ ဝက်ခြံကိုအရင်ပျောက်အောင်ကုဖို့၊ အဆီပြန်တာကို လျှော့ချပေးတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သုံးပေးဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ ပြီးမှ ဖြူကြပါနော်။
နောက်ပိုင်းမှာလည်း အလှအပစံနှုန်းတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ပြောင်းလဲလာပြီမို့ စွတ်မဖြူချင်ကြပါနဲ့ဦးလို့နော်။ တော်ကြာ ပြန်ညိုချင်မှ မီးသွေးတွေပွတ်နေရမယ် စိတို့ 😛
ပေါ့စခေငျြလို့ကွောငျရုပျထိုး၊ ဆေးအတှကျလေး ဆိုတဲ့ အကှကျတှေ
မှနျမှနျဖွယေောငျးလေး။ အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့ပစ်စညျး (skincare) ကိုသှားဝယျတဲ့အခါမှာ အသားဖွူခငျြလို့ဆိုပွီးပဲ အမွဲပွောဝယျတယျမလား? အလှကုနျပစ်စညျးကုမ်ပဏီတှကေလညျး လူတှတေောငျးဆိုတာမြားတော့ ဒီ Whitening line (အသားဖွူစတေဲ့ပစ်စညျးတှေ) ကိုပဲထုတျလာကွပွီး သိပျမလလေ့ာကွတော့ဘဲ ဘာသုံးရမလဲ မေးတာနဲ့ ဒါကိုပဲထိုးပေးတတျတာက အကငျြ့ကွီးတဈခုလို ဖွဈနရေောလေ…
မယုံရငျတဈအိမျတကျတဈအိပျဆငျး မှနျတငျခုံတှေ လိုကျကွညျ့မလား? ၁၀၀ မှာ ၉၀ လောကျက ဒီလိုအသားဖွူမယျ့ ပစ်စညျးတှကေိုပဲ သုံးတာ။ အဲ့တော့ မပွောမပွီး မတီးမမွညျဆိုသလိုပဲ အသညျးတှအေရမျးယားလာလှနျးလို့ ခုပွောတော့မယျ။
ယူတို့တှေ အသားဖွူဖို့အတှကျ လုပျလို့ရတဲ့ နညျးလမျး ၃ မြိုးရှိတယျဆိုတာသိလား?
ပထမတဈမြိုးက ဗီတာမငျစီသောကျပေး၊ ဗီတာမငျစီပါတဲ့ ပစ်စညျးတှကေိုသုံးပေးတော၊ ဒုတိယတဈခုက ဗီတာမငျ B3 (Niacinamide) ကို သောကျပေးတာ (သို့) ဗီတာမငျ B3 (Niacinamide) ပါတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို သုံးပေးတာ၊ တတိယတဈခုကတော့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာရှိတဲ့ မယျလနငျဓာတျတှကေို လြှော့ခပြဈလိုကျတာ စသညျဖွငျ့ရှိပါတယျ။
ပထမတဈနညျးကတော့ အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့ ပစ်စညျးတှမှော ပါဝငျတဲ့ဓာတျပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီ ဗီတာမငျစီက ဝကျခွံသမားတှနေဲ့ လုံးဝမတညျ့ဘူးဆိုတာ သိကွလားဟငျ? ဒါကွောငျ့ တိုနာသုံးပွီးမှ၊ စကငျးကဲလိုကျမှ ဝကျခွံတှေ ပိုထှကျလာတယျ ဆိုတာမြိုးကွုံရတာပေါ့။ ကောငျတာကမမတှလေညျး ပေးကွတယျနျော အားကွီးနဲ့။ အဆီတှအေရမျးပွနျပွီး ဝကျခွံတဈပွုတျလိုကျ ထှကျနလေညျး ရော့ Whitening။ အလှနျအကွူးတှေ လုပျကွတာတျော… ဖွူရငျပွီးရော.. စုတျပွတျနလေညျး အဆငျပွတေယျဆိုရငျတော့ ရပါတယျ ယူတို့သဘော။
နောကျတဈမြိုးက ခန်ဓာကိုယျထဲမှာရှိတဲ့ မယျလနငျဓာတျကို လြှော့ခတြဲ့နညျး။ ယူတို့အသားဖွူခငျြတာ ကိစ်စမရှိဘူး။ ဒီမယျလနငျဓာတျတှကေ ယူတို့ကို ခရမျးလှနျရောငျခွညျကနကောကှယျပွီး အရပွေားကငျဆာဖွဈပှားနှုနျးကို လြှော့ခပြေးတဲ့ပစ်စညျးဆိုတာကို ယူတို့မသိတာလား၊ မသိခငျြယောငျမြား ဆောငျနရေော့သလား?
နောကျပွီး ဒီလိုအသားဖွူဆေးတှကေ ဓာတုပစ်စညျးတှေ အရမျးမြားပွီး ဖွူရငျလညျး သဘာဝအတိုငျးဖွူတာမဟုတျလို့ ကောငျးနတေဲ့ အသားအရတေောငျ စနျးစနျးတငျ့ဖွဈသှားနိုငျတဲ့အပွငျ ကငျဆာဖွဈဖို့ အားပေးသလိုမြိုးလညျး ဖွဈတတျတာမို့ ဒီနညျးကိုလညျး လကျရှောငျသငျ့ပါတယျနျော။
နောကျဆုံးတဈခုကတော့ Vitamin B3 (Niacinamide) ပါတဲ့ပစ်စညျးတှသေုံးတာ။
ဒီနညျးလမျးလေးကတော့ အားလုံးထဲမှာ နှငျးအကွံပွုခငျြတဲ့နညျးလေးပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကရှိရငျးစှဲအသားကို ဖွူသှားစတောမြိုးမဟုတျဘဲ မညီမညာဖွဈနတောလေးတှကေိုပဲ ညီညာသှားအောငျ ညှိပေးတဲ့အပွငျ အသားအရတေိုငျးနဲ့လညျး သငျ့တျောတာဆိုတော့ အဖုထှကျတာတှေ၊ အဆီပွနျတာတှနေဲ့ မယျလနငျးဓာတျကို လြှော့ခပြဈလိုကျတာမြိုးတှမေရှိဘဲ အန်တရာယျကငျးကငျး သုံးစှဲနိုငျပါလိမျ့မယျနျော။ ဒါပမေဲ့ ဒီဓာတျပါတဲ့ပစ်စညျးက ရှာရတာတော့ နညျးနညျးလေး ခကျတာမို့ အခကျအခဲလေးတော့ ရှိနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ဝငျးပစိုပွညျတဲ့ အသားအရကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျစဖေို့ မီးဖိုခြောငျထဲက လြှို့ဝှကျမိတျဆှလေေးမြား
ဆိုတော့ ဗီတာမငျစီက ဈေးကှကျထဲမှာ လှယျလှယျကူကူ တှနေို့ငျတာမို့ ဒါပဲ သုံးမှရမယျဆိုရငျတော့ ဝကျခွံသမားတှေ ဝကျခွံကိုအရငျပြောကျအောငျကုဖို့၊ အဆီပွနျတာကို လြှော့ခပြေးတဲ့ အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို သုံးပေးဖို့ အကွံပွုပါရစေ။ ပွီးမှ ဖွူကွပါနျော။
နောကျပိုငျးမှာလညျး အလှအပစံနှုနျးတှကေ တဖွညျးဖွညျးနဲ့တော့ ပွောငျးလဲလာပွီမို့ စှတျမဖွူခငျြကွပါနဲ့ဦးလို့နျော။ တျောကွာ ပွနျညိုခငျြမှ မီးသှေးတှပှေတျနရေမယျ စိတို့ 😛
Tags: danger, good, line, Products, skincare, white skin, Whitening
Hnin Ei Oo February 19, 2019
ဝက်ခြံအရမ်းထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီ (၆) ချက်ကို လုံးဝရှောင်သင့်ပါတယ်။
Hnin Ei Oo June 3, 2019